Ama-Quotes Wempi Wokudla Okuhehayo Ama-Anime Fans Azothanda - Okunye
Izilinganiso ezingama-18 ezihehayo ezivela ezimpini zokudla ukukusiza ukhumbule ama-anime
Umthombo wesithombe ofakiwe: Wallpaper.alphacoders.com
Izimpi Zokudla ingenye ye-anime engiyithandayo ngenxa yezizathu ezimbalwa.
Ngithanda ukuncintisana, futhi ngingumuntu oncintisanayo.
I-Food Wars inezifundo eziningi nezinkomba “zebhizinisi”.
Ingenye ye-anime eheha kakhulu yohlobo lwayo.
Futhi ayikho i-anime encintisana nayo, ngoba 'ukudla' kungukugxila okungavamile kochungechunge lwe-anime ngokujwayelekile.
Kepha yilokho okwenza izingcaphuno, ukuphawula, izikhathi nezinhlamvu kube mnandi kakhulu. Kuhle ngokwanele kimi ukuthi ngabelane ngezingcaphuno ezinhle kakhulu i-anime okufanele inikele ngazo.
Uma uthanda izimpi Zokudla, nazi izingcaphuno eziyi-18 ezifanele ukwabiwa…
Izilinganiso ezinhle kakhulu zezimpi zokudla:
1. Izilinganiso zeSoma Yukihira
“Lokhu kungumbono wami nje kuphela kodwa… nginomuzwa wokuthi labo ababona indlela eyodwa efanele abasoze badlulela phambili bafinyelele ezintweni ezimangalisa ngempela. Okubaluleke kakhulu ... lolu hambo alumnandi uma wazi ukuthi uyaphi. ” -Soma Yukihira
'Ukuphinda isivivinyo namaphutha nokuhluleka kaningi… yileyo nqubo eyenza izitsha zikhanye.' - Soma Yukihira
“Unosizi kakhulu, awuyazi injabulo yangempela yokupheka. Yingakho ungahleka, kulezo zinhlobo zemidlalo uvele untshontshe ukuziqhenya komphikisi wakho ngokuwina okungenasisekelo… angisoze ngamukela umpheki onjalo. ” - Soma Yukihira
“Ermm… nginguSoma Yukihira. Uma kukhulunywa iqiniso, bengingalindele ukuthi ngizongeniswa kulesi sikole. Angihleleli ukulahlekelwa yisigejane esithile esingakaze sime phambi kwamakhasimende. Ngizonisebenzisa nonke njengamatshe okunyathela. Manje njengoba ngilapha, ngizothatha indawo ephezulu. ” - Soma Yukihira
'Ungacabangi ngezinto ezingadingekile, vele wenze isidlo esivumelana nawe!' - Soma Yukihira
“Ngifuna ukudla ukudla okwenziwe yibo bonke abapheki… futhi ngincintisane nabo. Lapho kunabantu abaningi abenza izinto zihluke ngokuphelele esitsheni sami, kuba mnandi ngokwengeziwe. Ngifuna ukuvikela leyo ndawo. ” - Soma Yukihira
'Ngenzele umusa uyeke ukubanqumela injabulo yabanye abantu ngabo.' - Soma Yukihira
“Uqinisile, ngingumpheki opheka ukudla okuphansi. Futhi ungaba yinkosazana yomhlaba wokudla futhi ube nolimi lukankulunkulu. Kodwa uyazi, uma uhlala etafuleni udlala umgxeki, awusoze wakhula ekhishini. ” - Soma Yukihira
2. Izingcaphuno zikaJoichiro Yukihira
uhlu oluhle kakhulu lwe-anime sonke isikhathi
“Iqhinga lokuba ngumpheki omuhle, ngowesifazane ofanele. Owesifazane ozokwenza ube yindoda engcono. Kungcono ekuphekeni. Kungcono kukho konke. ” - UJoichiro Yukihira
3. Izilinganiso zika-Erina Nakiri
“Ngiyakuqonda ukuthi uthola ini kubaba. Futhi, kanjalo… nginqume ukuthi kumele ngiyeke isikhundla sami njengesihlalo seshumi. Kusukela manje ngivele ... ngivele nje ngingu-Erina omdala nje. ” - U-Erina Nakiri
4. Izilinganiso ze-Azami Nakiri
“Ngalesi sikhathi kusasa, konke kuzobe sekuphelile. Lo ngumbuso wokudla osezingeni eliphezulu waseJapan futhi ngiyinkosi yawo entsha. ” - U-Azami Nakiri
5. Izilinganiso ze-Akira Hayama
“Cha… kukhona akufihlayo. Noma engasebenzisi noma isiphi isinongo esikhethekile ukwengeza ephunga ... Kuyini lokho? Livelaphi iphunga eliyinkimbinkimbi? ” - Akira Hayama
6. Izilinganiso zeHinako Inui
“Uma bebhekene nezimo ezingaziwa, inkambu yokubona yomuntu ivele inciphe; imicabango yabo iba buthuntu, bese benza izinqumo ezingalungile. Lesi sabelo yisivivinyo sokuqala nje. Abapheki abakhubeka ngento enjengale - abadingeki eTōtsuki. ” - UHinako Inui
7. Izilinganiso ze-Megumi Tadokoro
“Bengihlale ngisindiswa yiSoma nangendlela abhekana ngayo nanoma yini enhle. Namuhla akazelanga ukuzongisindisa njengalezo ezinye izikhathi kodwa futhi uyalwa njengamanje. Angazi noma ngizokwazi yini ukukwenza ngedwa, kodwa… Soma, namhlanje ngicela unginike isibindi! ” - Megumi Tadokoro
8. Izilinganiso zeSatoshi Isshiki
'Ekugcineni lapha Tadokoro ... ngosuku ozothatha ngalo indiza usuka engadini yakho encane, encane.' - USatoshi Isshiki
“Wawuhlala uyintombazane ekhuthele eyayizofunda futhi iphathe kahle zonke izinhlobo zamasu… kepha olunye uhlangothi lwalokhu, wawukuphinda nje lokho okufundisiwe. Awukaze ume ngisho nokucabanga ubunjalo bezinto. Ngabe abantu bazoyithokozela i-soba engizoyenza? Ngabe ukunambitheka kuzodluliselwa ngempela kubantu abakudlayo? Ubungenandaba nezinto ezinjalo, yingakho uhlulwe yiSoma ngaphambi kokuthi umdlalo uqale. ” - USatoshi Isshiki
Ukucaphuna kukaSatoshi ku-Alice Nakiri ngemuva kokuhlulwa yiSoma.
9. Izilinganiso zika-Alice Nakiri
“Ukupheka kuwubuciko uqobo. Kuyinto ekhanya ngokwengeziwe njengoba uyicijela. ” - U-Alice Nakiri
10. Izilinganiso ze-Kojiro Shinomiya
“Uma ufuna ukukhula, bheka nje ngenhla kwakho. Baningi abantu abaphelele abangaba ifolishi lokukhula kwakho. ” - UKojiro Shinomiya
Yikuphi okuthunyelwe kwesilinganiso okuphakamisa ngokulandelayo?
ucezu olubizwa kahle kakhulu lwe-anime yempilo
60 Of The Greatest Dragon Ball Z Izilinganiso ZONKE Isikhathi
Izilinganiso ezinhle kakhulu ze-Eureka eziyisikhombisa ze-Anime ezinengqondo
imibukiso ephezulu ye-anime sonke isikhathi
ama-animes amahle kunayo yonke isikhathi
ucezu oluhle kakhulu lwe-anime 2015